Kuzoshuba iChippa neTshakhuma belwela ukubaleka izembe - Impempe
Kuzoshuba iChippa neTshakhuma belwela ukubaleka izembe
Akukapheli sikhathi esitheni lamaqembu ekhiphane inkani emdlalweni wamanqamu kwiNedbank Cup. Kwaba yiTshakhuma Tsha Madzivhandila eyaphuma ihleka yodwa njengoba yashaya iChippa United ngo 1-0, yaqukula indebe.
Kodwa ngoLwesithathu ntambama ePeter Mokaba Stadium kuzophinde kube ngomunye umdlalo wamanqamu ngokusho komqeqeshi weTTM, uDylan Kerr. Lo mqeqeshi uthi lona uzoba nzima kakhulu kwazise kulwela ukuvika izembe manje.
“Lona ngumdlalo omkhulu ofana nowamanqamu kuwo womabili lamaqembu,” kusho uKerr. “Sidlale nabo emavikini ambalwa adlule. Nginethemba futhi ngiyabethemba abadlali bami. Basemuzweni omuhle ukuthi singakwazi ukuthola amaphuzu amathathu.
“Ngethemba ukuthi wonke umuntu okhona lapha uzozinikela, kuthi labo abangaqokwanga ukuqala umdlalo beseke labo abaqokiwe,” kuphetha lo mqeqeshi.
Umdlali weChilli Boys, uPeter Maloisane yena uthi njengoba sebekwazi okumele bakulindele kwiTTM, kumele benze kangcono kulokhu.
“Besizinikele sizebenza kanzima. Siyazi ukuthi siyawadinga amaphuzu ukuze sigxume sisuke kule ndawo esikuyo ezosifaka emidlalweni yokuhlunga. Ngicabanga ukuthi sonke siwulungele lo mdlalo.
“Sababona kowamanqamu, siyakwazi esingakwenzanga kahle. Manje sesiyazi ukuthi kumele silindeleni kubo. Ngicabanga ukuthi sizokwenza kahle kulo mdlalo.
“Amaphuzu amathathu abaluleke kakhulu kithi njengoba ubona nje le ndawo esikuyo. Ngicabanga ukuthi uma sizikhandla, sidlala ngokubambisana siyiqembu singakwazi ukuwina,” kusho uMaloisane.
Previous Previous post: Ukuwina kuphela okubusa umqondo kaZwane ohola iChiefs empini yokugcina
Next Next post: ‘Asikaqedi,’ kusho uLakay weSundowns yize sebesidlile isicoco